निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिले सांसद हुन खोज्नु अनैतिक र अनुचित ः अर्जुननरसिंह के.सी. « Lokpath
निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिले सांसद हुन खोज्नु अनैतिक र अनुचित ः अर्जुननरसिंह के.सी.
नयाँ सरकार गठन र राष्ट्रपतिले रोक्नुभएको अध्यादेशबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?संविधानको मर्मलाई बरिष्ठ कानुनविद्हरूले पनि आ–आफ्नै ढङ्गबाट ब्याख्या गरेको पाएँ । म कानुनविद् त होइन कानुनको विद्यार्थी मात्र हूँ । मैले बुझेको संविधानको भावना र मर्म के हो भने नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रियसभाको आवश्यकता हुँदैन । तर संविधानको धारा ८८ को उपधारा ८ को प्रकृयाले पूर्णता प्राप्त गर्नु अनिवार्य हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नै सरकार गठनकर्ता, निर्देशक र आवश्यक पर्दा विघटनकर्ता पनि हो । तर संघीय संसद , प्रतिनिधिसभाको विधिवत र औपचारिक जानकारी राष्ट्रपतिले प्राप्त गरिसके पछि यो प्रक्रिया शुरू हुन्छ । त्यस्ता कुनै कुराको प्रारम्भ नै नभई सत्तारोहणको हतार र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति आफैमा दम्भ र अहंकारपूर्ण एवं अराजक शैली हो । लोकतन्त्र पद्धतिमात्र होइन, यो प्रक्रिया र प्रवृत्ति पनि हो भन्ने सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियालाई पन्छाएर नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन नेपालको संविधानमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित र प्रस्तुत अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने कुनै व्यवस्था छैन । यसलाई रोक्ने दुस्साहस र षड्यन्त्र गर्नु कम्युनिस्ट गठबन्धनको निरंकुश यात्राको प्रारम्भ हो कि भन्ने शंका बढेको छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारबाट प्रस्तुत अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्न ढिलाई र अलमल गर्नु हुँदैन । त्यो घोर असंवैधानिक हुन्छ प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिएकोबारे पनि धेरै प्रश्न उठेका छन्, के उहाँले पदबाट राजिनामा दिनु पर्दैन ?जुनदिन संसद विघटन भयो, तत्कालै प्रधानमन्त्री कामचलाउ सरकारको प्रमुखमा परिणत भइसक्नु भएको हो । उहाँ अहिले कामचलाउ नै हुनुहुन्छ । जुनदिन प्रक्रियागत रुपबाट बैधानिक सरकार गठन हुन्छ, त्यसै दिन उहाँको पदावधि समाप्त हुन्छ । तसर्थ राजिनामा दिनु वा नदिनुमा खासै अन्तर छैन । तर आपूmले संसदीय निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिइसकेपछि पदबाट राजिनामा दिएको भए अझ स्वस्थ परम्परा स्थापित हुन्थ्यो तपाईँहरूजस्ता केही शीर्षस्थ नेताहरू राष्ट्रियसभामा आउने चर्चा पनि छ नि ?यो निरर्थक हल्ला हो । मलाई थाहा छैन । जनअभिमतमा पराजित भइसकेपछि फेरी संसदको सदस्य बन्नु मेरो दृष्टिकोणमा सर्वथा अनैतिक र अनुचित हो । मलाई त्यतातिर कुनै अभिरुचि र सरोकार छैन
प्रकाशित मिति: २०७४,पुष,१०,सोमवार ०६:३१